आज ४ फागुनका नेपाली मिडियामा पूर्वसभामुख महराकाे सुनुवाइले प्राथमिकता पायाे भने नेपाल प्रहरीमा एआईजी बढुवाकाे विषय पनि चर्चामा रह्याे । यसका अतिरिक्त सरकारका २ वर्षकाे समीक्षा, अपराध, दुर्घटना पनि आजका नेपाली मिडियामा समेटिए ।
बलात्कार प्रयासको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस सकिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महराका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवप्रसाद मैनाली, रमणकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, डा. भीमार्जून आचार्य र सबिता भण्डारी बराल तथा अधिवक्ताहरू सुशील सापकोटा, मुरारी सापकोटा, डा. दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका हुन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७२ जनाविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । योसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीका लागि बाटो खुलेको छ ।
सरकारले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तन नै सरकारको सफलताको मानक हो, जुन नेपाल जस्तो देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि आदि क्षेत्रमा देखिनुपर्छ । तर, सरकार भने विदेशी संघसंस्थाले निकालेका तथ्याङ्क बोकेर हिँडेको छ ।
गत बुधबार नेपाल प्रहरीले २७औँ प्रहरी प्रमुख पायो । २६औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार अवकास पाएपछि २७औँ प्रहरी प्रमुखमा तत्कालीन डीआईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली नियुक्त भएका हुन् ।
विवादरहित रूपमा आईजीपी नियुक्त गरेको सरकारलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा भने सकस भएको छ । अहिले ३ जना एआईजीका लागि ६ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले अत्यन्त जोखिममा रहेको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण’ सम्बन्धी कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले सहकारीमा भ्रष्टाचार, कर छली भएको रकम आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको बताएका हुन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले विश्वभरी फैलिएको र हजारौँको मृत्यु भएको कोरोना भाइरसविरुद्ध एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुसले शनिबार आयोजित ५६औँ म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनले सबै देशहरुले एक अर्कालाई घृणा गर्ने र आलोचना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुेमा पनि जोड दिए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली श्रमिकले पनि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने श्रमिकका हकमा पनि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लागू गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ४, २०७६, ०६:०८:००